Hafatra heno matetika ny hoe mila mahay maka lesona amin’ireo zava-drehetra efa nitranga isika. Ny zava-misy anefa dia rehefa mety amin’ny mpanao politika mahazo avara-patana any amin’ny an-daniny ilay hoe niteraka krizy hatrany ny fanonganam-panjakana nisy teto dia izay foana no voizina. Ny vahaolana maika ahafahana misoroka an’izany anefa dia manjavozavo fa tsy hita izay tena vontoatiny. Ho an’ny an-kilany kosa dia ny viventesana ny zo fototra ny fanonganam-panjakana no maha diavolana ny sain’izy ireo ary angamba heveriny ihany koa fa hahazoany seza haingana ka dia izay foana no hiraisaina efa ho isan’andro. Tsy afa-miala ao anatin’ny tokotaniben’ny resaka fanonganana ireo ary misarika ny sain’ny rehetra hihevitra fanonganam-panjakana hatrany. Rahoviana kosa isika no mba hihevitra izay hananganana ity firenena ity ?